Amabhulashi Enja Angcono Kakhulu nokuthi Asetshenziswa Kanjani | Izinja World
Amabhulashi angcono kakhulu ezinja nokuthi asetshenziswa kanjani
Nathi Cerezo | | Izesekeli zezinja
Amabhulashi ezinja ayisisekelo okufanele sibe nawo ekhaya ukuze sigcine uboya bawo buhlanzekile, liyacwebezela futhi linempilo ikakhulukazi, nakuba siqaphela ukuthi ngezinye izikhathi ukuthola ibhulashi eliphelele noma ukulixubha kungaba buhlungu kancane.
Yingakho silungiselele lesi sihloko esiphelele lapho ungeke nje uthole amabhulashi angcono kakhulu ezinja iyathengiswa ku-Amazon, kodwa futhi izinzuzo zokuxubha isilwane sakho, amathiphu okuthi ungakwenza kanjani futhi ujwayele nokunye okuningi. Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi ubheke lesi esinye isihloko esihlobene mayelana okhipha izinwele.
Ibhulashi le-ACE2ACE Le...
Inja Ibhulashi, Ikama ...
I-Docatgo Brush ye ...
I-FURminator Undercoat ...
I-ACE2ACE Boost Brush ...
I-Le Salon Rubber Brush ...
1 Ibhulashi elingcono kakhulu lezinja
1.1 Ibhulashi lamazinyo elihoxiswayo
1.2 Ikama lokulwa nefindo
1.3 Ibhulashi elithambile neliqinile elikabili
1.4 Isikhiphi sezinwele sezinja ezincane
1.5 Ikama ngekhanda elikhiphekayo
1.6 Gcoba amagilavu ​​nge-massage effect
1.7 Ibhulashi le-massager elithambile
2 Izinzuzo zokuxubha inja yakho
3 Kufanele uyibhulashe kangaki?
4 Uyixubha kanjani inja yakho
4.1 Indlela yokujwayela ibhulashi
4.2 Amathiphu okuxubha okuhle
5 Ungathenga kuphi amabhulashi ezinja
Ibhulashi elingcono kakhulu lezinja
Ibhulashi lamazinyo elihoxiswayo
Izinja zebhulashi ezi-Pecute kanye ...
Okwakudala phakathi kokwakudala kodwa okusontekile okunethezekile: leli bhulashi linama-metal bristles ukuze lingene lijule kuboya besilwane futhi libushiye njengamajethi egolide. Ine-ergonomic wizadi nomsebenzi owusizo kakhulu: ama-tines ahlehliswa, ngakho-ke ungakwazi ukususa zonke izinwele eziqoqwe ebhulashini ngokucindezela inkinobho. Okokugcina, ibhulashi linconywa izinja ezinoboya obude noma obuphakathi, ngoba uma zifushane kakhulu, ama-bristles angase angakhululeki noma abangele amanxeba amancane. Ngesizathu esifanayo, akunconywa ukuyisebenzisa kumakati anezinwele ezimfushane.
Ikama lokulwa nefindo
I-Pecute Dog Commb ...
Omunye umkhiqizo omuhle ovela e-Amazon, kulokhu ngaphandle kwama-spikes, okwenza uphelele kuzo zonke izinhlobo zezinja. Kulokhu, ikamu liqukethe izingxenye eziyindilinga eziyishumi nambili eziqoqa izinwele ezifile bese ziqaqa amafindo. Njengokungathi lokho akwanele, ibhulashi lihambisana nekamu, nama-bristles abukhali futhi ahluke kakhulu, ukuze ukwazi ukuqeda amafindo anzima kakhulu. Nokho, ukuphawula kuqokomisa ukuthi uma unganakile futhi uxube izinwele zakho ngobumnene, kungase kube nolaka ngandlela-thile.
Ibhulashi elithambile neliqinile elikabili
I-FURminator Ibhulashi elimbili ...
I-Furminator ingenye yamabhulashi anconywa kakhulu ukuxubha izinwele zesilwane sakho, empeleni, ungayisebenzisa ezinjeni zazo zonke izinhlobo zezinwele ngisho namakati. Ibhulashi linobuso obubili, obunye bunezinsimbi zocingo eziqedwe ebholeni ukuze lingalimazi, eliqoqa kahle ukungcola. nezinwele ezifile ezinqwabelene ejazini, nolunye uhlangothi olunama-bristles athambile ukuze lukhanyise futhi luhlanze izinwele ngendlela ekha phezulu. Ngaphezu kwalokho, inesibambo se-ergonomic esikhululekile kakhulu.
Isikhiphi sezinwele sezinja ezincane
Ibhulashi Lamakati Ezinja, ...
Ngenxa yobukhulu bayo, leli bhulashi elinama-metal bristles, nakuba liqediwe ngebhola lepulasitiki ukuze ligweme ukulimaza isikhumba, lilungele izinja ezincane ngisho namakati. Ukusebenza kulula kakhulu: kufanele nje uxube ukuze ususe izinwele ezifile. Isikhiphi sezinwele sihlanganisa uhlobo lwama-tweezers ukuze lukwazi ukulihlanza kangcono, kanye nenkinobho engemuva ukuze kukhishwe izinwele ezifile kalula kakhulu.
Ikama ngekhanda elikhiphekayo
Lelikama libuye libe nama-bristles enziwe ngocingo. Kuyimodeli elula, kodwa enesici esithakazelisayo kakhulu esenza kube inketho enconywa kakhulu kulabo abathanda ukuhlanzeka nokuhleleka, ikhanda elikhishwayo ongalihlanza ngokuthanda kwakho. Ukusebenza kuyafana nokwamanye amabhulashi. Ukuphawula kugqamisa ukuguquguquka kwayo uma kukhulunywa ngokuyisebenzisa ezinjeni ezimfishane, ezinezinwele eziqinile nokuthi isebenza kahle kakhulu uma ichithwa.
Gcoba amagilavu ​​nge-massage effect
Amagilavu ​​anomphumela wokubhucungwa njengalawa inketho yokucatshangelwa kulabo abanezilwane ezifuywayo ezingawathandi amabhulashi, ngoba bazocabanga ukuthi uyabaphulula. Nakuba zimbi ngesifiso, kufanele kuqashelwe ukuthi zifeza umsebenzi wazo kahle kakhulu ngokususa izinwele ezifile zesilwane sakho esifuywayo futhi, ngaphezu kwalokho, ungazisebenzisa ngezinye izikhathi, njengesikhathi sokugeza. Amaqhuqhuva enziwe ngerabha, ngakho-ke ayikho ingozi yokulimaza inja yakho.
Ibhulashi le-massager elithambile
Ibhulashi lezinja ...
Futhi siphetha ngokuthi a Kulula kakhulu ukusebenzisa ithuluzi futhi ilungele lezo zinja ezizwela kakhulu, njengoba ama-spikes ayo enziwe ngenjoloba futhi awenzi noma yimuphi umonakalo. Nakuba ngezindleko zokususa izinwele ezincanyana kunama-bristles endabuko, le massager ishiya izinwele zesilwane sakho esifuywayo zihlanzekile impela, futhi iguquguquka kakhulu futhi ithandeka kakhulu kuzo. Isebenza ikakhulukazi ngezinja ezinezinwele ezimfishane futhi ine-velcro yokuyivumelanisa nesandla sakho.
Izinzuzo zokuxubha inja yakho
Ukuxubha inja kungenye yezinto abantu babo okufanele bayenze, yebo noma yebo, ngoba kuwela ngaphakathi kwenhlalakahle okufanele bayizwe. Ngaphezu kwalokho, inezinzuzo eziningi ezinjengalezi ezilandelayo:
Lapho exubha izinwele zakhe, susa zonke izikhumba nezinwele ezifile obekulokhu kuqongelela ijazi, okuzokwenza libukeke linempilo futhi likhanya, kanye nokuhlala ngaphandle kwamafindo. Njengokungathi lokho akwanele, ukususa izinwele ezifile nakho kuzonciphisa inani oyithola ekhaya noma ezingutsheni.
Ngaphezu kwalokho, nawe uyasiza nwebisa amafutha emvelo akhona ejazini futhi uvuselela isikhumba, into esiza futhi ukugcina inja yakho inempilo kakhulu.
Ekugcineni, ngokujwayelana nomzimba wayo, uzokwazi ukusheshe ubone ukuthi inamazeze noma imikhaza, noma uma kukhona okuthile noma ubhekana noshintsho oluthile lokumyisa kudokotela wezilwane.
Kufanele uyibhulashe kangaki?
Kuye ngohlobo lwezinwele inja enazo, kuzodingeka uzixube kaningi noma kancane. Isibonelo, izinja ezinezinwele ezinde kakhulu, ezijwayele ukunamafindo, njengama-Collies, zizodinga ukuxutshwa okungenani kanye ngesonto. Ngakolunye uhlangothi, izinja ezinezinwele ezimfishane zizodinga ukubhulashwa kanye njalo ezinsukwini ezimbalwa, kuyilapho lezo ezinezinwele ezimfushane kakhulu zizodinga kuphela ukuxubha wonke umbhangqwana kuya emasontweni amathathu ukuze zigcine ijazi nesikhumba sinempilo.
Noma kunjalo, Kunconywa kakhulu ukwenza ukuxubha okusheshayo njalo ezinsukwini ezimbalwa ukuze ugcine ijazi lenja yakho liphilile futhi lilihle.. Futhi, ngisho noma uwayisa kumlungisi wezinwele, akuwona umqondo omubi ukuwaxubha njalo ukuze angawakhi amafindo.
Uyixubha kanjani inja yakho
Yini ebaluleke ngempela lapho uxubha inja Akuyona nje kuphela indlela yokuyixubha, kodwa futhi ukujwayela ukuze ingabi uvivinyo.. Nansi imikhondo yabo bobabili.
Indlela yokujwayela ibhulashi
Uma ungumuntu ojwayelekile e-MundoPerros, iseluleko esizokunikeza sona sizozwakala sijwayelekile, kodwa sinjalo ngempela. imfundo yezilwane eziningi isekelwe ekuthembekeni… Nemiklomelo. Ngoba:
Uma kukhulunywa ngokuxubha inja yakho, ungaqalisi ngqo. Vumela isilwane iphunga ibhulashi futhi ujwayelane nayo ukuze ungakwethusi.
Bese uqala ukuyixubha. Khuluma naye ngomoya ophansi futhi umphathe kahle uma ezolile. Uma ethukile, yeka bese uzama kamuva, mnike isikhathi ukuze ehlise umoya.
Iqhinga, empeleni, ukuqala kancane amaseshini okuxubha amafushane kakhulu futhi iqiniswe ngemiklomelo futhi kancane kancane iyandise njengoba inja ijwayela.
Amathiphu okuxubha okuhle
Manje njengoba usuyazi ukuthi ujwayela kanjani inja yakho ibhulashi, ake sikhulume ngakho indlela yokwenza ukuxubha okuhle, ukuze okuhlangenwe nakho kube mnandi kini nobabili.
Hlale uxubha kusukela phezulu kuya phansi futhi kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle.
Ungalokothi uxube uye ohlangothini oluphambene nokukhula kwezinwele, ziyayizonda izinja.
Yiba kakhulu qaphela ukugwema ukumdonsa izinwele nokumlimaza.
Uma uthola amafindo amaningi, ungasebenzisa a isimo yomile.
Ungakhohlwa mnike izibiliboco noma umphazamise ngethoyizi lokuhlafuna uma ethukile kakhulu.
Okokugcina, uma ubona ukuthi ukuxubha akunakwenzeka, cabanga ukumyisa kumlungisi wezinwele okwezinja.
Ungathenga kuphi amabhulashi ezinja
Amabhulashi ezinja alula ngendlela emangalisayo ukuwathola, nakuba engahlali enekhwalithi esiyifunayo. Phakathi kwezindawo ezinconyiwe kakhulu, sithola:
Amazon, ngaphandle kokungabaza enye yezindawo lapho uzothola khona ukuhlukahluka okuningi, okulungile uma ufuna okuthile okuqondile kakhulu. Inamavoti amaningi avela kubasebenzisi bayo, okukuvumela ukuthi uthole okufunayo, nakuba phakathi kwemikhiqizo eminingi ehlukene kungase kube isicefe ngezinye izikhathi. Ekugcineni, ngenketho yabo ye-Prime bakulethela ekhaya ngokushesha.
I-Las izitolo ezikhethekile Ezilwaneni ezifana ne-Kiwoko noma i-TiendaAnimal zinhle uma ufuna umbono wochwepheshe othe xaxa. Ngaphezu kwalokho, ukuba nezitolo ezibonakalayo ungabheka umkhiqizo khona lapho futhi ubone ukuthi uhambisana yini nalokho okufunayo.
Ekugcineni, kunezinye izindawo eziningi, njenge izindawo ezinkulu njenge-Carrefour noma i-El Corte Inglés, lapho uzothola khona isigaba sezilwane ezinamamodeli ambalwa amabhulashi angakukhipha enkingeni nganoma yisiphi isikhathi.
Sithemba ukuthi sikusize uthole amabhulashi ezinja afanelana kangcono nezidingo zakho kanye nezenja yakho. Sitshele, hlobo luni lwebhulashi olisebenzisayo? Ingabe uyafuna ukwabelana nathi nganoma iyiphi indlela? Ingabe inja yakho ithanda ukuxutshwa noma kufanele uyishiye ezandleni zomkhandi?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Amabhulashi angcono kakhulu ezinja nokuthi asetshenziswa kanjani
Izihlalo zabakhubazekile ezingcono kakhulu zezinja ukuthuthukisa ukuhamba kwazo
Amanabukeni enja angcono kakhulu kuzo zonke izimo